Xildhibaannada Golaha Shacabka oo akhrinta 1-aad marsiiyay labo Hindise-Sharciyeed – Kalfadhi
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo akhrinta 1-aad marsiiyay labo Hindise-Sharciyeed
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa shalay Akhrinta 1-aad marsiiyay Hindise-Sharciyeedka Difaaca Qaranka iyo Hinside-Sharciyeedka Hay’adda Socddaalka iyo Jinsiyaddaha
Guddomiye ku-xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka Mudane Cabduweli Sheekh Ibraahim Muudey iyo Guddomiye ku-xigeenka 2aad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad, ayaa shalay shir-guddoominaya fadhiga 15-aad ee Kalfadhiga 7-aad ee Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar isloow Ducaale, oo Baarlamaanka u sharxayay hindise-sharciyeedka Socddaalka ayaa sheegay in sharcigan uu nidaaminayo, isla markaanna uu haggaajinayo, dib-u-qaabeynta hannaanka maamulka iyo hoggaanka hay’adda socdaalka iyo jinsiyaddaha ee Soomaaliya, awoodeeda si waafaqsan qodobada siddeedaad iyo 54 ee dastuurka KMG ee dalka.
Hay’adda waxaa ay yeellaneysaa sharci nidaamiye iyo sharci-hoosaadyo u gaar ah si loogu dhaqan-gellinayo sharcigaasi iyo qaabka shaqo ee fulinta howl-waddeenadda. Xeer-hoosaadkaasi waxaa soo saari doonna wasiirka amniga guddaha, marka uu tallo soo jeedin ka helo Agaasimaha hay’adda.
Labadan Hindise sharciyeedka ah ee ay mudanayaasha Golaha Shacabka ay Akhrinta koowaad marsiiyeen ayaa waxaa si toos ah loogu wareejiyay Guddiyada Arrimaha gudaha iyo Amniga iyo sidoo kale Difaaca si ay waajibkooda uga soo gutaan ka dibna ay dib golaha ugu soo celiyaan si Akhrinta labaad loo marsiiyo, loogana doodo, waxaana kulanka soo xiray Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka oo kulanka shir guddoominayay.
Muxuu ka hadlayaa Hindise-sharciyeedka Hay’adda Socdaalka, iyo Jinsiyaddaha?
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ka tacsiyadeeyay geerida Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya